Akanjo ny mini iPad hazo misy ity fonony vaovao | Vaovao IPhone
Akanjo ny iPad mini-hazo miaraka amin'ity fonony vaovao ity
Maro aminareo no mitady fonony ho an'ny iPad na iPad mini anao, izaho manokana dia mampiasa fonony maranitra (RED) ho an'ny iPad 2 ary ny marina dia faly amin'izany aho. Apple dia nanandrana foana ny ho eo amin'ny tsena rehetra ary ny tontolon'ny fonony (na fonony) na tranga ho an'ny iPhone dia nahavita nanamboatra nosy tsara. Raha ny marina, ny tsaho dia nilaza fa handeha hivarotra Smart Cover miaraka amin'ny klavier anatiny izy ireo.
Androany dia mitondra ny tolo-kevitra Miniot izahay, mpanamboatra iray izay tia manamboatra zavatra amin'ny hazo. Ao Miniot dia miloka foana izy ireo fa mitafy ny iDevices-tsika amin'ny hazo ho fitaovana lehibe , ary izao izy ireo dia nanao rakotra hazo mahatalanjona ho an'ny mini iPad anay.
Azonao jerena ao amin'ny sary izay lohany amin'ny lahatsoratra, miatrika fonony ambony kalitao izahay. Sarony misy fizarana amin'ny hazo maizina ary ilay ampahany manatrika ny efijery iPad dia misy famaranana lamba.
Ny zavatra mahaliana dia ny vita amin'ny sombin-kazo Izy io dia azo ahodina araka ny hitanao eo amin'ny sary etsy ambony mba hahafahana manohana ny iPad mini amin'ny toerana samihafa.
Raha ny voalazan'izy ireo dia tsara ny manolotra amin'ny fomba fampiroboroboana satria manolo-kevitra ny hampiditra logo ao amin'ny orinasa izy ireo na lahatsoratra rehetra atolotra azy ho an'ity tanjona dokam-barotra ity.
Zavatra fampiroboroboana izay mety ho somary lafo ..., nanomboka mitentina € 59 ity fonony ity, tsy hanolorana maimaim-poana, fa hampiasana manokana tsy dia lafo loatra raha oharina amin'ny vidin'ny Apple ohatra.
Manoro hevitra an'izany izahay jereo Tranonkala Miniot satria manana vokatra ho an'ny iDevices anao rehetra ianao.
Rohy - Miniot
Fampahalalana bebe kokoa - Ny Smart Cover misy fitendry dia azo aseho rahampitso
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Akanjo ny iPad mini-hazo miaraka amin'ity fonony vaovao ity
Te handravaka ny iPad amin'ny rindrina Halloween ve ianao?
Mimpi, lalao ankamantatra sy sehatra ho an'ny iPhone